Umatshini weqhwa, Umatshini wokuthintela umkhenkce, umatshini weqhekeza lomkhenkce- uSnowman
Oluludaka ICE KOMATSHINI
UFujian Snowman Co., Ltd. wasekwa ngo-Matshi, 2000 kwaye wadweliswa esidlangalaleni eShenzhen Stock Exchange ngoDisemba, 2011 (Ikhowudi yeSitokhwe: 002639). U-Snowman, lishishini elinobuchwephesha obuphezulu kunye netekhnoloji yecompressor njengombindi, egxile kuphuhliso, ukuyila, ukuvelisa, ukuthengisa, ukufakela kunye nasemva kokuthengisa iinkonzo zefriji yezorhwebo kunye neyorhwebo kunye neeyunithi zokugcina ezibandayo kunye neepakethe ezipheleleyo zeenkqubo zefriji kunye nomkhenkce. inkqubo yokwenza.
Ikomkhulu le-Fujian Fuzhou Binhai yeSithili seShishini, i-SNOWMAN ineePaki ezimbini zoShishino: IBinhai Industrial Park kunye neLiren Industrial Park. Kulapho, isigaba sokuqala seBinhai Industrial Park sigubungela iihektare ezingaphezulu kwama-80, ngelixa iLiren Industrial Park isekwa, igubungela ngaphezulu kwe-156 eehektare. Inqanaba lesithathu, iGuhuai Industrial Park, elungiswayo, iya kubandakanya ngaphezulu kwehektare ezingama-3000.
I-Dyestuff kunye nezoBunjineli beMichiza
Ezi ziindaba zamva nje ezivela kwinkampani yethu .Siza kuhlaziya ezinye iindaba zenkampani, amanqaku oshishino, kunye namanqaku okusika kule modyuli amaxesha ngamaxesha ... Siyavuya ukwabelana ngala macandelo kunye nawe, siyathemba uyayithanda